Nolosha Finland > Qoyska > Wada deganaansho > Ilmaha ku dhasha xiriirka wada degenaanshada lammaanaha
Haddii ad wada nooshihiin idinka oo an isqabin oo ilmo idiin dhasho, waa in la aqoonsadaa aabonimada. Haddii aabonimada la aqoonsan waayo ilmahaasi sida sharcigu dhigayo wuxuu ahaanayaa aabo la’aan waxana mas’uul ka ahaanaysa daryeelkiisa iyo masruufkiisa hooyadii, xataa haddii ad wada dagantihiin. Aabonimada wakhtiga uurka ayaa la aqoonsan karaa waxana lagu fulin karaa howshaas xarunta hooyooyinka iyo dhallaanka (äitiysneuvola). Markuu ilmuhu dhasho aabuhu wuxuu ku aqoonsan karaa ilmihiisa isaga oo u tagaya shaqaalaha ku qoran kormeerka caruurta (lastenvalvoja) ee degmada. Aqoonsiga aabonimada waxa xaqiijinaya xafiiska diwaanka ee degmada (maistraatti).
Adabshinka ama korsiga ilmaha ee dadka wada degenaanshada ku wada nool
Labada wada degenaanshada ku wada nool si wada jir ah uma soo qaadan karaan ilmo korsi ah. Sidoo kale ilamaha uu dhalay labada wada degen midkood ma korsan karo kan kale.
Heshiisyada caalamiga ah
Sidoo kale haddii wadan kale oo ka mida wadamada waqooyiga Yurub (Sweden, Norway, Denmark iyo Island) uu xaqiijiyo qirashada aabenimada xaqiijintaa way ka dhaqan-galaysaa dalka Finland.
Sidoo kale xaqijinta aabenimada ee lagu xaqiijiyey wadamada ka baxsan waqooyiga Yurub waa laga aqbalayaa dalka Finland, haddii aabenimadu sharci kaytahay wadanka lagu soo xaqiiyey laf ahaantiisa ayna waalidiintu wadankaas isaga ah wada deganaayeen.
Caruurta meher la'aanta ku dhashay, xaaladoodu aad ayey u kala duwan tahay wadamada kala gedisan dhexdooda. Aabenimada dalka Finland lagu qirtay ama lagu xaqiiyey waxaa laga yaabaa inaysan ka dhaqangalayn wadanka uu ka soojeedo ilmuhu ama aabuhu. Arintan wax ka weydii safaarada wadankaaga.
Canshuurta dhaxalka iyo dhaxalka lammaanaha laga geeriyooday
Haddii labada wada degan ay leeyihiin ilmo ay wada jir u dhaleen, canshuurta dhaxalka ee ilmuhu waxay la mid tahay canshuurta dhaxalka ee ilmaha meherka ku dhashay.
Haddii uu geeriyoodo lamamanayaasha xiriirka wada deganaanshada ku wada nool midkood, markaas ilmaha uu dhalay waxay keelada ka qaadanayaan lacagta hawlgabka ee agoonta laga geeriyooday.
Markii ugu dambeysay ee waqtiga lala simay: 28.12.2018 Boggan war-celin ka soo dir